Haweenka Dalka Sacuudiga Oo Khaati Ka Taagan Dowladdooda
Wednesday January 09, 2019 - 14:04:21 in Wararka by Abdi A.
Riyaad-(Caalami-News)-Sacuudi Carabiya ayaa soo jiidatay indhaha caalamka sanadkii hore markii ay haweenka ka qaadday xayiraad muddo dheer saarneyd oo ku saabsan gawaari kaxeynta.
Si kastaba, xayiraadaha haweenka saaran ayaa weli sidooda ah - gaar ahaan, "hannaanka hoggaanka ragga", aabbaha gabadha, walaalkeed, seygeeda amaba wiilkeeda ayaa gaara go`aannada ayada ku saabsan.
"Tani waa wax saameyn ku leh haweeney walba oo Sacuudiyaan ah, laga soo bilaabo dhalashadeeda ilaa dhimashadeeda. Waxaa loola dhaqmaa sida in laga awood badan yahay oo kale," ayay BBC-da u sheegtay saxafiyadda haysata dhalashada Mareykanka kana soo jeedda dalka Masar Mona Eltahawy.
Hannaanka hoggaanka ragga, ayay khubarradu ku tilmaameen, inuu yahay "caqabadda ugu weyn ee haweenka ka hortaagan inay qayb ka noqdaan dhaqaalaha bulshada ".
Mohammed Bin Salman and his father King Salman have introduced some reforms
Maryam al-Otaibi ayaa la xiray 100 maalmood kaddib markii ay ka cararatay guriga aabbaheed
Kaddib bishii May, sanadkii 2018 - toddobaadyo uun kahor markii xayiraadda gawaari kaxeynta laga qaaday, xukuumadda Sacuudiga waxay bilowday ugaarsasho ka dhan ah haweenka u dooda xuquuqda aadanaha, iyagoo dhowr haween xabsiga dhigay.